Mpanamboatra Noopept Powder (157115-85-0) tsara indrindra
Vovoka Noopept molekiola Nootropic mitovy amin'ny Piracetam. Ny vovoka Noopept dia misy fiatraikany mitovy amin'ny vovonan'ny piracetam, amin'ny fanomezana malefaka …… ..
Vovon-tsakafo Noopept manta (157115-85-0) horonan-tsary
Noopept vovoka (157115-85-0) Description
Row Noopept dia fampihetseham-pahaizana mampihetsi-po izay mahasalama tsara kokoa noho ny Piracetam amin'ny fiatrehana ny fahatsapana ara-pihetseham-po taorian'ny fahasimban'ny atidoha na ny atidoha.
Ny fihenan'ny kôreana Raw Noopept (N-phenylacetyl-L-prolylglycine etyleser ester) dia manodidina ny fefy 1000 mahery kokoa noho ny piracetam. Ny piracetam dia manatsara ny haavon'ny fahatsiarovan-dahatsary, ary ny poezia Row Noopept koa dia manatsara ny fitohanana sy ny fitadiavana fahatsiarovana. Manohitra ny tebiteby, ny antioxidant, ary manakana ny neurotoxicity amin'ny fatran'ny amyloid, ary manatsara ny rà mandriaka. Manampy amin'ny torimaso tsara, ny fahasosorana, ny fahantrana, ny aretin'andoha, ary ny manana ny hery ilaina haka ny andro. Izy io koa dia manampy amin'ny ahiahy, fahatsiarovana, ary adin-tsaina.
Noopept powder Specifications
Anarana simika N -phenylacetyl-L-prolylglycine etyl ester, GVS-111
Brand Name Rano Noopept roap
molekiolan'ny Formula C17H22N2O4
molekiolan'ny Wvalo 318.373 g / mol
mitsonika Point 97 ° C-98 ° C
Ny antsasaky ny biolojia 30-60 minitra
Solubility Ny vovo-dronono Noopept dia nootropic mety levona amin'ny rano, fa tsy ho levona mora amin'ny rano na ranom-boankazo.
Storage Temperature Arovy amin'ny toerana maizim-pito amin'ny hafanana tsy mihoatra ny 25 ° C. Aza milefitra amin'ny ankizy.
Application Ampiasao ny fahatsiarovan-tena, ny fiheverana ary ny asa fanao mahazatra hafa, ary ny faharatsiana ara-pihetseham-po.
Noopept (GVS-111) dia anarana marika N-phenylacetyl-L-prolylglycine etil ester, molekiola nootropic synthetic.
Matetika no misavoritaka ao anatin'ny fianakaviana racetam, noopepta dia peptide tsy manam-pahaizana manokana izay novolavolaina tany Rosia mba hizaha ny fihenan'ny tsikera momba ny taona. Ankehitriny dia ampiasain'ny tanora zokiolona sy tanora izy ireo ary lasa iray amin'ireo zava-mahadomelina matanjaka sy malaza indrindra ampiasaina ankehitriny.
Ny poezia noopept dia mahery kokoa noho ny piracetam sy ny hafainganam-pandaminana manatsara ny zava-mahadomelina, ny noopept dia ampiasaina ho toy ny zava-mahadomelina mahazatra ny fitsaboana amin'ny alàlan'ny aretina Alzheimer, dementia, ary ny taona hafa mifandraika amin'ny fahatsiarovan-tenan'ny firenena toa an'i Rosia sy ny Firaisana Sovietika teo aloha.
Noopept dia nitombo be tao anatin'ny roa taona farany ary ankehitriny dia iray amin'ireo sariohatra natokana indrindra amin'ny fiarahamonina.
Noopept powder (157115-85-0) Mekanisma amin'ny asa
Noopept dia manana rafitra mihetsika sarotra. Ny vokatra nootropic an'ny zava-mahadomelina dia entin'ny iray amin'ireo metabolite miasa (cycloprolylglycine) dia mitovy amin'ny rafitra amin'ny dipeptide siklisika endogenous miaraka amin'ny hetsika anti-amnesika. Napetraka fa ny zava-mahadomelina dia mampitombo ny fitenin'ny NGF sy BDNF ao amin'ny hippocampus, mampiseho toetra miabo amin'ny choline amin'ny haavon'ny fitondran-tena sy ny neurônaly, mampihena ny adin-tsaina oxidative ary manatsara ny asan'ny rafitra antioxidant, ary mamehy ny kinases pSAPK / JNK ary pERK1 voatarika. Noopept dia manatsara ny fahatsiarovan-tena amin'ny alàlan'ny fampitomboana ireo simika ao amin'ny ati-doha antsoina hoe BDNF ary amin'ny alàlan'ny fomba hafa.
soa of Noopept powder (157115-85-0)
Manatsara ny fahombiazana sy ny fahatsiarovan-tena
Noopept Mampiakatra ny atidohan'ny atidoha
Noopept dia manampy amin'ny fiatrehana
Mitombo ny fifantohana amin'ny Noopept
Noopept afaka manampy amin'ny Alzheimer
Recommended Noopept powder (157115-85-0) Dosage
Ny noopept dia manana dingam-pandaminana ambany kokoa noho ny piracetam (4800mg), ny dosage fahazoan-dàlana ho an'ny noopept dia 10-30mg.
Araka ny fandinihina iray, ny poezia tsy tapaka dia ny 1000 fotoana mahery kokoa noho ny piracetam, izany no mahatonga ny dosie voatendry ho moana.
Side effects of Noopept powder (157115-85-0)
Ny voka-dratsin'ny vovoka Noopept dia malefaka ary ny ankamaroan'ny mpampiasa dia tsy mahatsapa fiatraikany mihitsy. Misy voka-dratsy kely vitsivitsy misy, fa raha mandray an'io nootropic io amin'ny habetsany ianao dia mety hiteraka aretin'andoha, havizanana, maloiloy ary tsy fahitan-tory.
Torolàlana Noopept: Inona no azon'ny Noopept aminao?
Ny vovony unifiram